ရှမ်း(မြောက်ပိုင်း) – Page9– ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ယနေ့ (18-7-2018)(0930) အချိန် ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) မိုင်းရယ်မြို့နယ် ပြည်ည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ခုနှစ် ပညာသင်​နှစ်​ တက္ကသိုလ်​ဝင်တမ်းစာ​မေးပွဲတွင်​ ထူးချွန်​စွာ​ အောင်​မြင်​​ခဲ့ကြသည့် ​ကျောင်းသား​ကျောင်းသူ (၃၂) ဦးနှင့်​ အနှစ်နာခံ ကြိုးစားအားထုတ် ကြိုးပမ်းသင်ကြားပေးခဲ့သည့် အထက်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ (၁၈) ဦး တို့ကို ဂုဏ်​ပြုချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ကြောင်းနှင့် အခမ်းအနားသို့ ကော်မတီဝင်များ စည်းရုံးရေးမှူးများ ကျောင်းသားမိဘနှင့်ဆရာ/မများ စုစုပေါင်းအင်အား (90)ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပါကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဒုတိယသုံးလပတ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
လားရှိုး ဇူလိုင် ၈
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဒုတိယသုံးလပတ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲက လားရှိုးမြို့ရှိ ပြည်နယ် ပါတီရုံးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ရှေးဦးစွာ အစည်းအဝေးတက် ရောက်လာသူများက နိုင်ငံတော် သီချင်းသီဆို၍ အခမ်းအနားဖွင့် လှစ်သည်။
၂၈.၆.၂၀၁၈ ရက်နေ့ ရှမ်းမြောက် မိုးမိတ်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ တည်ထောင်ထားသော “ ဖြိုးစေတနာ နာရေးကူညီမှုအသင်း ´´ ၏ နှစ်ပတ်လည် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁၂း၃၀) အချိန်တွင် စတင် ကျင်းပရာ အစည်းအဝေးသို့ နာရေးအသင်းဥက္ကဌ (မြို့နယ်ပါတီဥက္ကဌ) ဒေါ်နန်းခင်မြင့်ဌေး တက်ရောက်လမ်းညွှန် အကြံပြု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယပိုင်းတွင် ဆက်လက်၍ မြို့နယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။ တက်ရောက်လာသော မြို့နယ် EC ၊ အရံ EC ၊ ရပ်/ကျေးဥက္ကဌများမှ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဇူလိုင်လတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ချမှတ်ခဲ့ပြီးး အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၃း၀၀) နာရီအချိန်တွင် အောင်မြင်စွာ ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
၂၇.၆.၂၀၁၈ ရက်​နေ့ နံနက်​ ၁၁း၃၀ နာရီက သီ​ပေါမြို့နယ်​ ပြည်​ခိုင်​ဖြိုးပါတီရုံးခန်းမတွင်​ ဗမာတိုင်းရင်းသား​ရေးရာဝန်​ကြီး ဒေါက်တာအောင်​သန်း​မောင်​သည်​ ပြည်​နယ်​ပါတီ​ကော်​မတီ ဦးစိုင်းလင်း၊ ခရိုင်​ပါတီ​ကော်​မတီ ဦးအုန်း​မောင်​၊ မြို့နယိပါတီဥက္ကဌ. ဦး​အောင်​​အောင်​ ၊ မြို့နယ်​​ကော်​မတီဂင်​များ၊ အရံ​ကော်​မတီဝင်​များ၊ ရပ်​​ကျေးဥက္ကဌနင့် ရပ် /ကျေးပါတီအဖွဲ့ဝင်​များနှင့် ​တွေ့ဆုံ၍ နှုတ်​ဆက်​အမှာစကား​ပြောကြားခဲ့ရာ ..တက်​​ရောက်​လာကြသူများက ပြန်​လည်တင်ပြ​ဆွေး​နွေးခဲကြ​ကြောင်း သိ့ရပါသည်​။
ရမ .၀၀၃. သီ​ပေါ
မဘိမ်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့ လ၀ါကျေးရွာ အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းသို့  ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ်များ သွားရောက်လှူဒါန်း
မဘိမ်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဌ ဦးဇော်လွင်သည် ခရိုင်ကော်မတီဝင် ဦးတိုးမြင့်အောင်.၊ ခရိုင်အမျိုးသမီးရေးရာဥက္ကဌ ဒေါ်ခင်ဝိုင်းချစ်၊ မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဝင်ဦးခင်မောင်ရွှေ၊ ဦးကံရွှေ၊ ဦးသန်းမြတ်စိုး၊ ကျေးရွာပါတီဥက္ကဌ ဦးထွန်းခိုင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်တို့သည် ဇွန်၂၅ ရက်နေ့က လဝါကျေးရွာအခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်ပြီး ကျောင်းသား/သူ (၂၀၉) ဦးအား ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် ဗလာစာအုပ် (၅) အုပ်နှုန်း ဘော့ပင်တစ်ချောင်းစီဖြင့် ဗလာစာအုပ်ဒါဇင် (၇၉) ဒါဇင်နှင့်ဘော့ပင်အချောင်း (၂၀၉) ချောင်းအား သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ရာ ကျောင်းသား/သူများက လက်ခံရယူခဲ့ကြသည်။
မဘိမ်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဌ ဦးဇော်လွင်သည် ခရိုင်ပါတီကော်မတီဝင် ဦးတိုးမြင့်အောင်၊ မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဝင် ဦးခင်မောင်ရွှေ၊ ဦးကံရွှေ၊ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးဇော်မင်းနောင်တို့နှင့်အတူ ဇွန်၂၁ ရက်နေ့က အမက ၁ သို့ သွားရောက်ပြီး ကျောင်းသား/သူ ၃၈ ဦးအား တစ်ဦးလျှင် ၅ အုပ်နှုန်းဖြင့် ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ် ၁၉၀ အုပ်အား သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ရာ ကျောင်းသား/သူများက လက်ခံရယူခဲ့ကြပါသည်။
သီပေါမြို့ “ဖြိုးစေတနာရှင် “လူမှု့ကူညီရေး အဖွဲ့သည် ယမန်နေ့က မြို့နယ်ပါတီ ဥက္ကဌ. ဦးအောင်အောင် အသင်းဥက္ကဌ ဒေါ်လှလှဝင်း(အမျိုးသမီးရေးရာ)၊ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးကျော်လှိုင်(မီဒီယာ)၊ ရှမ်း/မြောက် လူငယ်လှုပ်ရှားမှု့အဖွဲ့ ဒုခေါင်းဆောင် မိုင်းဟန်ဝင်းအောင် တို့နှင့် အတူ သီပေါမြို့ ကုတင်(၁၀၀)ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ယာဉ်အက်ဆီးဒင့်ကြောင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသနေရသော နောင်အန်ကျေးရွာမှ့ ပါတီဥက္ကဌ ဦးမြင့်အောင် အတွက် “ဖြိုးစေတနာရှင်” အဖွဲ့ က ထောက်ပံ့ငွေ ၂သောင်း ကျပ်အား သွားရောက် ကူညီပေး အပ်ခဲ့ကြပါသည်။
မဘိမ်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့ မလှိုင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု အင်ကျေးရွာ အမကသို့ ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ်များ သွားရောက်လှူဒါန်း
မဘိမ်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဌ ဦးဇော်လွင်သည် ဇွန် ၁၃ ရက်နေ့က ခရိုင်ပါတီကော်မတီဝင် ဦးတိုးမြင့်အောင်၊ မြို့နယ်လူငယ်ရေးရာဥက္ကဌ ဦးစိုင်းမောင်မောင်ကျော်တို့နှင့်အတူ မလှိုင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု အင်ကျေးရွာ အမကသို့ သွားရောက်ပြီး ကျောင်းသား/သူ (၂၈) ဦးအား ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ် တစ်ဦးလျှင် (၄) အုပ်နှုန်းဖြင့် သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။ (၁၁) နာရီအချိန်တွင် ကျေးရွာဓမ္မာရုံတွင် တောင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး အင်မလယ်ချောင်းမှာ မြေသားတမံတည်ဆောက်ပေးရေးအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁၂) အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းစံအောင်မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းမေးမြန်းမှုအား သက်ဆိုင်ရာမှ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ဖြေကြားချက်များကို မြို့နယ်ပါတီဥက္ကဌက ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တောင်သူများ၏လိုအပ်ချက်ဆွေးနွေးချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆွေးနွေးခဲ့
၁၃.၆.၂၀၁၈ တွင် မိုးမိတ်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ဗဟိုလူငယ်ညီလာခံ (၂၀၁၈) အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပထမဦးစွာ ခရိုင်ပါတီဥက္ကဌ ဦးစိုးမြင့်နှင့် မြို့နယ်ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်ခင်မြင့်ဌေးတို့က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း လူငယ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တာဝန်ခံ ကိုကိုအောင်မှ လူငယ်ညီလာခံအတွေ့အကြုံများနှင့် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို တင်ပြဆွေးနွေးကာ တက်ရောက်လာကြသော ကော်မတီဝင်များနှင့် လူငယ်များက ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး (၁၂း၀၀) နာရီအချိန်တွင် အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာရုတ်သိမ်းခဲ့ကြပါသည်။
ယနေ့ ရှမ်းမြောက် မိုးမိတ်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ လက်ခုပ်တန်းရပ်ကွက် ပါတီဆိုင်းဘုတ် တင်ပွဲအခမ်းအနားကို နံနက် (၉း၀၀) နာရီအချိန်တွင် စတင်ပြုလုပ်ရာ မြို့နယ်ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်ခင်မြင့်ဌေးနှင့် ပါတီကော်မတီဝင်များ ၊အရံကော်မတီဝင်များ ၊ ရပ်/ကျေးပါတီဥက္ကဌများ၊ ပါတီဝင်များ စုစုပေါင်း (၃၀) ဦးတက်ရောက်ကြကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရာ မြို့နယ်ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်ခင်မြင့်ဌေး၊ မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဝင် ဦးကျော်စိန် (ပညာရေးရာတာဝန်ခံ)၊ ဦးမောင်မောင်ကြီး (စည်းရုံးရေးရာတာဝန်ခံ)၊ ရပ်ကွက်ပါတီဥက္ကဌ ဦးဝင်ဖေတို့မှ အသီးသီးဆွေးနွေးကြပြီး တက်ရောက်လာသော ပါတီဝင်များမှ လိုအပ်ချက်များ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဆွေးနွေးပွဲကို နံနက် (၁၀း၃၀) အချိန်တွင် အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။